MAN UNITED VS LIVERPOOL: Shaxda & safafka ay duhurkan kusoo geli karaan! – Gool FM
MAN UNITED VS LIVERPOOL: Shaxda & safafka ay duhurkan kusoo geli karaan!
(Manchester) 10 Maarso 2018 – Waxaa maanta duhurkii xilliga dalkaasi Ingiriiska isku dheggan labada kooxood ee ugu waawayn dalkaasi, ciyaar ay Manchester United ku martigelinayso Liverpool oo ka tirsan Premier League, kaasoo ay madaxa isla gelayaan Jurgen Klopp iyo dhiggiisa Jose Mourinho.
Dhanka Manchester United
Jose Mourinho ayaa qaba walaacyo ku aaddan dhaawacyo kooxdiisa haysta. Daafaca Phil Jones ayaa seegay dhowr kulan, waxaana la filayaa inuu midkanna ka maqnaado, isagoo ay wehliyaan Daley Blind iyo Marcos Rojo. Labada laacib ee khadka dhexe ee Ander Herrera iyo Marouane Fellaini ayaa iyaguna dhaawacyo ku maqan.
Waxaa United sidoo kale walaacinaysa in Anthony Martial uu dowaan ku biiray liiskaasi dheer ee dhaawaca ku maqan, isagoo shaki uga jiro kulanka Liverpool. Waxaa isbeddel ku dhici karaa shaxda United oo uu kusoo laaban karo Bailly, waxaa isna wehlinaya dadabka bidix ee Luke Shaw.
Liverpool waxaa usoo noqonaya laacibka khadka dhexe ee Georhinio Wijnaldum oo dhaawac ku maqnaa. Liverpool iyadu ma wajahayso xasarad dhaawac oo sidaa u buuran, sidaa darteed waxay u badan tahay inay lasoo shirtagto isla safkii ay ciyaartii hore kaga badisay Newcastle United.
SAFAFKA SUURTAGALKA AH:
Goolhayaha ugu NASIIBKA xun Premier League (Goolasha ugu qurxoon uunbaa laga dhaliyaa marwalba)
EIBAR VS REAL MADRID: Shaxda & safafka ay duhurkan kusoo geli karaan!